Riyaal Maadiriidiifi Liivarpuul: Shaampiyoonaa ta'uuf maaltu murteessa? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Laawuroosaan (tarree gara oliirraan mirgaa gara bitaatti isa afraffaa) garee isaa Liiverpuul waliin bara 1984 yeroo Roomaatti mo'atan
Gareen lamaan kilaboota Awurooppaa keessaa waancaa shaampiyoonii Awurooppaa kan dhumaaf ga'an Liiverpuul warra Ingiliziifi Riyaal Maadiriid warra Ispeenidha.
Waancaa kilaboonni kun lamaan mo'achuuf falmii taasisaniin alattis maqaa gaarii taphattoonni ciccimoo akka Mohaammed Saalhaafi Kirisaanoo Ronaaldoo addunyaarratti qaban caalaa itti cimsatanis hedduu eegama.
Akkuma taaktikaa qophiin sammuu Kilooppiif barbaachisaadha
Torban dhumaa akka malee dheerata. Yeroo tapharra qabatamaan ta'an garuu haalli jijjiiramuu mala.
Yeroo dhiyaataa akkuma deemeen, muddamuun dabalaadhuma deema, tapha guddaafi eegamu waan ta'eef. Akkamitti akka qophii taaktikaa kan dirreerratti agarsiisaanii alatti qophiin sammuu haalaan barbaachisaadha.
Kiloop torban tokko dursee kanarratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Taphattoonni isaa akka isaan cimanii xapha gaarii agarsiisaniif hojjechaa jira.
'Waantota jedhamaniifi miliyoonaan namoonni TV'n nu daawwatu jedhan dagachuu'
Kiloopp taphattoonni isaa sammuu isaanii keessaa Riyaal Maadiriidiifi taphattoota kilabichaa babbakkallcha ta'an hunda waliin akka taphatan dagachuun eegaluu qabu.
Gama taphattootaan kana gochuudhaaf, cimsanii ilaaluufi namoonni miliyoonaan nu daawwatu kan jedhu sammuu isaanii keessaa baasuu qabu.
Ammam kan iji addunyaa irra jiruufi tapha murteessaa ta'us taphattoonni qalbii isaanii tapharra taasifachuun barbaachisaadha.
'Gareen guddaan shaampiyoonaaf taphatan hunduu waancaa argatanii gammadu jechuu miti'
Goodayyaa suuraa Riyaal Maadiriid Kaardiifitti yeroo darbe shaampiyoonaa ta'anii yeroo gammachuu isaanii ibsatanitti
Riyaal Maadiriid kan muuxannoo hedduu qabuufi walitti ansuudhaanille sadaffaaf kan waancaa Awurooppaaf dorgomaa jiran caalaa, Liiverpuuliif haaraa waan ta'uuf cimsee of qopheessuutu irraa eegama.
gareen lamaanuu taphattoota dandeettii addaa yeroo gara fuula duraatti furuufaman waan ajaa'ibaa hojjetan qabu.
Akkasumas gareen kun lamaan kubbaa miilaa Awurooppaa miilaa keessatti seenaa calaqqisaa qabu. Tapha bareedaa nama hawwatus ni agrasiisu.
Garaa garummaan lamaan isaanii jiru muuxannoodha. Riyaal Maadiriid, muuxannaa dheeraa qaba. Tapha guddaa akkasii kana keessa erga seenanii attamitti akka cufanii ofiimmoo duratti deemanii haleelani itti beeku. Liiverpuul garuu kana gochuun hin danda'an.
Maadiriid yoo dursee Keev irratti lakkoofsise attamitti ijaaramanii akka Liiverpuuliin itti cufan sirriitti ni beeku.
Tilmaama Laawuroo: Liiverpuul 2-1 mo'ata
Riyaal Maadiriidiif waan itti tolu ta'a garuu akka ani yaadutti Liiverpuul karaa ittiin mo'atu ni qabaata.
Kun karaa isaan waancaa kanaaf dhiyaachuuf ittiin hojjetaniifi gooliiwwan hedduu ittiin lakkoofsisan.
Goodayyaa suuraa Liiverpuul tapha shaampiyoonii Awurooppaa 12 keessatti gooliiwwan 40 lakkoofsisaniiru. Kana keessaa 10, Mo Saalhaa, 10 Firmiiniyoo 9 ammoo kan Sdi'oo Maaneeti
Shaampiyoonaa Awurooppaa ta'uun taphattoota gara kilaba ofiitti fiduuf baayyee gargaara, Kilooppis kana milkeessuuf taphattoota biroo argachuun Piriimer Liigiin Ingliiz bara dhufuu mo'achuuf hojjechuu danda'a.
Kanaaf, Sanbatarra mo'achuun Liiverpuuliif carraa guddaadha. Anis kana ni taasisu jedheen yaada.
Tilmaama Piriimiyer Liigii Laawuroo moo Komeediyaan Niish Kumar
WHO haayidirookiloorookiiniin Covid-19 wal'aanuuf yaalii taasifamu dhorke
Naannoo Tigraay mormiin jiraa? Wanti ta'e maali?
Covid-19n qabamuufi dhiisuu keenya akkamiin adda baasna?
‘Waggootan 25f haadha warraa kiyyaaf guyyaa guyyaan walaloon barreessaaf’
Maaskii banaa uuruu mul'isuuf fayyadamuun barbaachisaa ta'aa jira
Atakaaroo lafa qonnaan bultoota Finfinneerraa 'saamame' jedhamee
Dorgommii aartii 'aartiistota jajjaboo horachuuf kaayyeffate'
Awustiraaliyaan saffisa intarneetii isa guddaa galmeessifte
WHO qoricha busaan Covid-19 wal'aanuuf yaalii taasifamu maaliif dhorke?